Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Thailand » Mekong Forum momba ny fizahan-tany Mekong 2018 napetraka amin'ny volana ho avy: nisoratra anarana ve ianao?
Associations News • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny indostria fihaonana • fivoriana • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Hisokatra ny varavaran'ny Mekong Tourism Forum (MTF) 2018 manomboka ny 26-29 jona 2018 hanome sehatra fiaraha-miasa ho an'ireo mpandray anjara amin'ny sehatra tsy miankina sy tsy miankina amin'ny indostrian'ny fizahantany. Ny toerana dia Nakhon Phanom any avaratra atsinanan'i Thailand, tanàna lehibe sisintany Thailand-Laos ao amin'ny renirano Mekong.
Ity hetsika ity dia hiara-hientana ireo mpandray anjara lehibe hifanakalo hevitra momba ny fampandrosoana, ny marketing ary ny fampiroboroboana ny dia mahomby sy maharitra ao anatin'ny Greater Mekong Subregion (GMS).
Maimaimpoana indray ny MTF 2018 amin'ity taona ity ho an'ireo matihanina amin'ny indostria, misaotra ny mpampiantrano amin'ity taona ity, ny Ministeran'ny fizahan-tany sy fanatanjahantena any Thailand ary ny faritanin'i Nakhon Phanom. Ny Forum momba ny fizahantany ao Mekong dia voarindra miaraka amin'ny Birao Mpandrindra ny fizahan-tany ao Mekong (MTCO).
Na izany aza, ny solontena dia angatahina mba hamerina amin'ireo vondrom-piarahamonina eo an-toerana ary handoa vola kely handraisana anjara amin'ny Village Experience, ary ny vola azo dia mankany amin'ireo vohitra eo an-toerana.
Voatondro ho fanasongadinana ny kaonferansa dia handray traikefa amin'ny foko ara-poko ireo solontena, hifanakaiky sy hipetraka amin'ny lafiny samihafa amin'ny fiainam-pokontany - andiana hetsika vaovao sy lalina ho an'ny vondron'olona vitsivitsy.
Ny Forum momba ny fizahan-tany any Mekong 2018 dia hifantoka amin'ny fironana amin'ny dia vaovao miaraka amin'ny lohahevitra: "Manova ny dia - manova fiainana."
Amin'ity taona ity ny Forum dia manana fizarana telo lehibe:
Ny alarobia tolakandro, ny fifanakalozan-kevitra manomboka amin'ny fizahan-tany Buddhist ka hatramin'ny fizahan-tany Responsible dia mifantoka amin'ny mety hanovana ny dia sy ny fiainan'ny olona
Ny Alakamisy maraina, teny fototra iray avy amin'ny mpitantana dia lavitra avy amin'ny sehatra samihafa, mifantoka amin'ny fitsangatsanganana miova avokoa.
Ny alakamisy tolakandro dia misy ny foto-kevitra miainga avy amin'ny fizahan-tany momba ny fizahan-tany mankany amin'ny fizahan-tany ara-pinoana izay hotontosaina any amin'ny tanàna valo miorina amin'ny tanàna manodidina ny Nakhon Phanom any avaratra atsinanan'i Thailand. Avy amin'ny fombafomba fandraisana an-tanàna nentim-paharazana sy fisakafoanana antoandro - tena izy ho an'ny tanàna tsirairay avy - arahin'ny traikefa an-tanàna mifandray amin'ny fanenomana, ny jono, ary ny hetsika hafa, ny delegasiona dia afaka mifandray amin'ny olona eo an-toerana, fa ny olona eo an-toerana kosa afaka mifandray amin'ireo mpitsidika manerana an'izao tontolo izao.
Mandritra ny MTF 2018, Mekong Trends dia hanolotra topi-maso mialoha momba ny Tatitra vaovao momba ny fitsangatsanganana tompon'andraikitra ao amin'ny GMS, ao anatin'izany ny fandalinana tranga amin'ny Showcases enina Experience Mekong enina, vita amin'ny fiaraha-miasa amin'ny University Mahidol. Miaraka amin'ny tatitra farany natomboka tao amin'ny ITB Asia any Singapore tamin'ny volana oktobra 2018, manantena ireo mpikarakara fa ny fiaraha-miasa amin'ny tatitra dia manome fotoana lehibe ho an'ireo orinasa haneho ny fifandanjan'izy ireo amin'ny fizahan-tany tompon'andraikitra.
Sambany, ny MTF dia hanasongadinana ny Fetiben'ny Sarimihetsika Mini Mekong voalohany, ao anatin'izany ny Fihaonamben'ny Filma Film & Destination, ary koa ny fizarana horonantsary momba ny sarimihetsika sy loka. Natombok'i Destination Mekong, Mekong Minis dia fetibe sarimihetsika tokana izay mankalaza ny endrika sy traikefa isan-karazany ao amin'ny Greater Mekong Subregion ary mampiroborobo ny faritra amin'ny maha-fizahan-tany fizahan-tany tokana. Fanentanana isam-paritry ny fizahan-tany fizahan-tany izy io, izay efa nahatratra olona 1 tapitrisa hatramin'ny nanombohany ny volana janoary 5. Ny fampielezan-kevitra dia tohanan'ny Minisiteran'ny fizahantany sy ny sehatra tsy miankina ao amin'ny Greater Mekong Subregion.
Miara-miasa amin'ny WWF, ny Mekong Mini Movie Festival dia nampahafantatra ny Mekong Dolphin tandindomin-doza, ilay mascot an'ny hetsika Mekong Minis. Lasibatra ny Festival mba hisarihana ireo mpanao sarimihetsika mpankafy sy matihanina ary hamorona atiny marobe ho an'ny faritra miaraka amin'ny fampiroboroboana sy ny fisavana amin'ny sehatra iraisam-pirenena.
Ny fizahan-tany Mekong dia ezaka iarahan'ny Kambodza, Sina, Lao, Myanmar, Thailand, ary Vietnam hampiroborobo ny Greater Mekong Subregion ho toerana fizahan-tany tokana.
Raha mila fanazavana fanampiny, kitiho eto.
Read about maninona i Thailand no manosika ny mpizahatany India?.